Izvo ZVIMWE Mutemo (Marijuana Mukana Kudzoreredza uye Kuwedzeredza Mutemo) - Dzimba Dzimba munaGunyana
Izvo ZVIMWE Mutemo - Marijuana Mukana, Kuwedzeredza, uye Expungement Mutemo
Ndeupi MORE Mutemo?
Chiitiko CHAKAWANDA ichavhoterwa neImba yeVamiriri izvi Gunyana. Ichi chichava chiratidzo chekutanga kubva pakapasiswa mutemo unodzorwa wezvinhu we1970, wakaisa cannabis muchikamu chakafanana neheroin, iyo Congressional chamber yakavhota kubvisa mbanje kubva muPurogiramu I yaidzora maratidziro ezvinhu.
Kupa mhosva nekuronga cannabis, kupa mari yekudyisazve mune vamwe vanhu zvakakanganiswa neHondo yeDrugs, kupa kubviswa kweimwe mhosva dzecannabis, uye zvimwe zvinangwa.
Ndechipi Chichava Migumisiro yeZVIMWE Chiitiko?
Kana iwo MORE Mutemo ukatanga kushanda zvizere, tichava nemamiriro ezvinhu apo mutemo unodzivirira vanhu vane mhosva dzepasi-pasi dzembanje. Zvinyorwa zvavo zvematsotsi zvichajekeswa uye mhosva dzavo dzinozotumirwa kune imwe nzvimbo yekutonga.
Bhiri iri rakabatanidzwa kupa mhosva nekuronga cannabis munzira dzakawanda dzaimbove dzakatarisana neHondo yeDrugs. Dzimwe mhosva dzekannabis dzichatumirwa kunodzingwa uye zvimwe zvinangwa zvebhiri zvichange zvichikanganisa hurongwa hwese hwekutonga.
Sechikamu chechiitiko chekubvisa kubva pakurongwa kwezvinhu zvinodzorwa, mbanje uye tetrahydrocannabinols haichazove chikamu chezvinhu zvinodzorwa. Kubviswa pachirongwa kunoitika kwete mushure memazuva zana nemakumi matatu kubva musi wekugadzwa kwemutemo uyu.
Chii icho ZVIMWE Chiito Chinangwa?
Anoshora mbanje padanho remubatanidzwa nekubvisa zvinhu kubva paMutemo Wezvinhu Zvinodzorwa
Inobvisa marihuana uye tetrahydrocannabinols kubva pamhedzisiro yezvinhu zvinodzorwa
Inoda matare emubatanidzwa kuti abvise mbanje nekusungwa uye kutongwa kune avo vachiri muhusungwa kana pasi pekutarisirwa nedare nekuda kwemhosva yembanje.
Inoda iyo Bureau yeVashandi Statistics kuti igare ichiburitsa huwandu hwehuwandu hwevanogona bhizinesi varidzi uye vashandi
Inogadzira trust fund yekutsigira zvirongwa uye masevhisi kune vanhu uye mabhizinesi munharaunda dzakakanganiswa nehondo yezvinodhaka,
Inoisa mutero we5% pane zvigadzirwa zvecannabis uye inoda mari inoiswa muhomwe yetrust,
Inopa Zvikwereti Zvemabhizimusi Ekupa zvikwereti uye masevhisi anowanikwa kuzvinhu zviri zvine chekuita nekannabis zviri pamutemo mabhizinesi kana vanopa masevhisi,
Inorambidza kunyimwa kwemubatanidzwa neruzhinji mabhenefiti kumunhu pahwaro hwehunhu hwakabatana necannabis kana kutongwa,
Inodzivisa kunyimwa mabhenefiti uye kudzivirirwa pasi pemitemo yekuenda kune dzimwe nyika pachishandiswa chiitiko chine chekuita nekannabis
Inotanga chirongwa chekudzima kutongwa uye kuitisa mitongo yekuwongorora kumisangano ine chekuita necannabis mhosva
Maitiro ECHIMWE Chiito Achaita Sei Bhizinesi reCannabis
Iwo WAKAWANDA Mutemo unobvumidza kumwe kuitisa kusarudza iwo maratidziro ari chikamu chebhizimusi re cannabis. Bureau yeLabour Statistics ichaunganidza, kuchengetedza, uye kugadzira ruzivo rweveruzhinji nezvehuwandu hwevanhu hwakanangana nevanhu varidzi vebhizimusi muindasitiri yecannabis. Panguva imwecheteyo, Bureau ichasanganisira vanhu vanoshanda muindasitiri ye cannabis.
Iyo yakazara huwandu hwedhi data inosanganisira:
Certification uye marezinesi
Mhuri uye chinzvimbo chemuchato
Nekutora data rataurwa, masangano epamutemo anokwanisa kuziva kuti zvikamu zvipi zviri muMutemo zvichave nemhedzisiro mubhizinesi re cannabis. Kupa data rakadai kunosarudza kuti sei uye kupi mirau yepamutemo ingashandiswa.
Iwo Maitiro Achaagumisa Sei Hondo Pamishonga?
Hondo pamusoro peZvinodhaka ndeyekuratidzira kwenyika inotungamirwa nehurumende yemubatanidzwa yeUS. Izvo zvinosanganisira kurambidzwa kwezvinodhaka uye kupindira kwemauto kuri kuda kudzikisa mabasa asiri pamutemo ayo ari chikamu chekutengesa zvinodhaka muUSA. Richard Nixon, aimbova purezidhendi, akazivisa nguva iyi muna 1971 uye akazivisa ruzhinji rwemapomero ezvinodhaka akaitwa kudzikisira kugadzirwa, kugoverwa, uye kudhakwa kwezvinodhaka.
Sechikamu cheMutemo mutsva WAKAWANDA, vanhu vakakanganisika neHondo pazvinodhaka icha kupihwa mari yekushandisa ekushandisa ekurapa ekushandisa. Iyo yepamutemo Nharaunda Reinvestment Grant Chirongwa ichapa akakodzera masangano nemari inodiwa. Pasi peshoko rekuti 'kushandisa mushonga kurapwa', isu tinoona humbowo-hwakavakirwa, hunyanzvi hwakatungamirwa uye hwakarongwa regimen inobatsira varwere vane dambudziko rekushandisa zvinodhaka. Kuregererwa uye kupora kunosanganisira kuongorora kwakazara, kutarisa, uye kuongorora kwechiremba.
Izwi rekuti 'chinokodzera chinzvimbo' rinoreva sangano risingabatsiri iro rinomiririra nharaunda kana chikamu chakakosha chenharaunda umo masevhisi anowanikwa kune vanhu vakanganiswa neHondo paDrugs. Muchikamu che5 cheZVIMWE Mutemo wa2019, tinogona kuwana mazwi anodzora kodzero dzevanhu vanoshandisa marapirwo.
Izvo ZVIMWE Act Chinyorwa & PDF
Unoda Kupinda muCannabis
CHITSAUKO CHAKAWANDA Chinoshandura Sei Hupenyu Hwedu?
Mune akawanda mamiriro, Hondo paDrugs yaive yakavakirwa pakupara mhosva kwezvinodhaka. Nekudaro, neiyo nyowani MORE Mutemo, mamiriro acho akasiyana. Tine kodzero inopfuura imwechete yekutaura kuti zvirevo zviri pamutemo zvinochinja nzira yatinoona mbanje uye zvigadzirwa zvecannabis.
Hondo yeDrugs yaive chikamu chenhoroondo yeAmerica uye yaive nemhedzisiro yakawanda munharaunda yedu. Ikozvino, isu tine ZVAKAWANDA Mutemo unogona kushandura zvachose maonero nemaitiro edu kana zvasvika mukugadzirwa uye kushandiswa kwezvinhu zvepfungwa.
Sechikamu cheZVIMWE Mutemo, zvinokwanisika kutora kodzero dzevanhu vazhinji vane rekodhi yematsotsi pakushandisa zvinodhaka nekuparadzira.
Chasara kuona kuti vanhu vangani vanowana maonero akasiyana kubva kudare kana zvasvika pamhosva dzepasi dzembanje. Kana izvi zvikaitika, vanhu vazhinji vanozokwanisa kuwana rusununguko uye kujekesa nhoroondo yematsotsi sechikamu cheMORE MITI yekushandisa.
Yakaringana Rezinesi Rezinesi Chirongwa
ZVIMWE Mutemo unodoma Bhizinesi Diki Bhizinesi kuti itange uye iite "Yakaenzana Licensing Grant Chirongwa", yekuvandudza nekushandisa zvirongwa zvakaenzana zvecannabisense rezinesi izvo zvinoderedza zvipingamupinyi pakupa marezinesi e cannabis uye basa kune vanhu vakanyanya kukanganiswa neHondo paDrugs, kusanganisira:
Kuregererwa kwemari yekushandisa kune vanhu vakave nemari pasi pe250 muzana yeFederal Poverty Level kweanenge mashanu emakore gumi apfuura avo vari vekutanga-nguva kunyorera.
Kurambidzwa kwekuramba rezinesi re cannabis zvichibva pakutongwa nemhosva ye cannabis yakaitika nyika isati yapa mvumo yecannabis kana zuva rekugadzwa kweMutemo uyu, sezvakakodzera.
Kurambidzwa pazvirango zvekutongwa nemhosva yekupa marezenisi kunze kwekuremekedza kutongwa kwakanangana nekuva nekushanda bhizinesi.
Kurambidzwa kwevanobata marezinesi ehunnabis vachiita fungidziro isina kunzwisisika yekuedza zvinodhaka zvevano tarisira kana vazvino vashandi, kunze kwekuremekedza kuongororwa kwezvinodhaka munzvimbo dzakachengetedzeka, sekutsanangurwa kunoitwa pasi peOmnibus Transportation Testing Act ya1991.
Kugadzwa kwebhodhi rezinesi re cannabis iro rinoratidzira hunhu, dzinza, hupfumi, uye kuumbwa kwevanhurume neHurumende kana kwenzvimbo, kushanda seboka rinotarisira chirongwa chakaringana chekupa marezinesi.
Nemakore Ye ZVIMWE CHITSAUKO
Musi waChikunguru 23rd, 2019 bhiri rakaunzwa.
Yakagamuchirwa muKomiti yeVatongi munaNovember, 20th, 2019 nevhoti ye24 / 10
Diki Bhizinesi Dare rakazivisa kuregererwa kwechikwereti muna Ndira 5, 2020.
Musi waNdira 15th, kunzwikwa kwemutemo muEnergy and Commerce Committee kwakaitwa.
Musi waAugust 28, zvaive Zvinonzi kuti Imba iri kugadzirira yakazara pasi vhoti pane ZVIMWE Mutemo munaGunyana.
Iyo Marijuana Justice Mubatanidzwa Shanda Pane IZVI ZVAKAITIKA
Marijuana Justice Coalition mubatanidzwa wakapamhama wemasangano gumi neshanu asingabatsiri uye ekumiririra nyika, akavambwa mu15, vakabatana kuti vange vachitsigira shanduko yemumbanje kuburikidza neyakaenzana yerudzi neyehupfumi.
Basa reMarijuana Justice Coalition pakuzivisa uye kupasiswa kweMORE Act rave rakakosha. Munguva pfupi yapfuura ivo vakanyora tsamba yekubatana kunhengo dzeCongress dzichivakumbira kuti vatsigire Marijuana Mukana Reinvestment & Expungement.
Muchikamu chino cheCannabis Legalization News takave nemukana wekuva navo sevaenzi, tinzwe zvavakatiudza pamusoro peMORE Act uye mubatanidzwa wavo.
Tsvaga mumiriri wako uye bvunza kuti vamire papi pa MORE Act.